Indlu yabantu abayi-2/4 kwifama yaseFonteregia
Ifama sinombuki zindwendwe onguBarbara E Roberta
Le ndlu ingaphakathi kwi-Agriturismo Fonteregia, i-cottage yelizwe esanda kulungiswa. Ijikelezwe ngamahlathi omnquma kunye nemithi yeyona ndawo ifanelekileyo yokuvuselela ukudibana nendalo.
Kumgama omfutshane ukusuka kwindlu yasefama, ofikelelekayo ngokuhamba ngeenyawo, yiMontecatini Alto, idolophu yamaxesha aphakathi enomtsalane wakudala. Iibhafu ezishushu zaseMontecatini naseMonsummano zimalunga nemizuzu eyi-10 ngemoto.
Indawo ikwanobuchule bokutyelela izixeko eziphambili zaseTuscan: iFlorence, iPisa, iLucca, iSiena.
Le ndlu ikwindawo entsha yokulungiswa kwefama. Ibandakanya ikhitshi, indawo yokuhlala enebhedi yesofa, igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye negumbi lokuhlambela elineshawa. Indawo enkulu yangaphandle, esetyenziselwa iindwendwe kuphela, iya kukuvumela ukuba ukonwabele amaxesha okuphumla okucocekileyo, ube nesidlo sasemini okanye isidlo sangokuhlwa kwindawo evulekileyo okanye ukutshisa ilanga egadini. Umyezo ukhokelela kwindawo yangasese ye-solarium, exhotywe nge-tub eshushu ngamanzi anokufudumeza ukuya kuma-degrees angama-40 (inkonzo yexesha elifumanekayo ukususela ngoMeyi 1 ukuya kwi-31 ka-Oktobha).
Indlu yeendwendwe ikwincam yomthi we-chestnut, ejikelezwe yimithi yomnquma. Indawo izolile, ijikelezwe yindalo. Kwi-600 m kude nedolophu yaseMontecatini Alto kunye neendawo zokutyela ezidumileyo kunye nezitrato zamaxesha aphakathi, iikhilomitha ezimbalwa ukusuka kwiidolophu ezidumileyo zaseMontecatini naseMonsummano. Izixeko eziphambili zobugcisa zaseTuscan ziphakathi kweekhilomitha ezingama-50: iFlorence, uLucca, iPisa, iSiena kunye nabanye abaninzi.
Umbuki zindwendwe ngu- Barbara E Roberta
Siya kuhlala sikhona ukuze samkele iindwendwe kunye nazo naziphi na iimfuno zabo: indawo yokuhlala yosapho lwethu eneneni iziimitha ezimbalwa ukusuka kwisakhiwo esisetyenziselwa ukwamkela iindwendwe.
UBarbara E Roberta yi-Superhost